Misy safidy hafa amin'ny chlorprofam ve? Experience UK - Gazety System Potato
в Torohevitra momba ny manam-pahaizana manokana, siansa
Maria Erokhova, mpikaroka zandriny, departemantan'ny aretin'ny ovy sy ny voly anana, FGBNU VNII phytopathology
Maria Kuznetsova, Head Departemanta, Departemantan'ny aretin'ny ovy sy legioma, FGBNU VNII Phytopathologistsи
Miova tsikelikely ny zava-misy eran-tany amin'ny fampiasana fanafody famonoana tsimoka, indrindra amin'ny chlorprofam. Any amin'ireo firenena ao amin'ny Vondrona Eoropeana, taorian'ny famoahana ny tatitry ny European Food Safety Agency (EFSA) momba ny chlorprofam (CIPC), ny fampiasana an'io akora io. voarara.
Amin'io lafiny io, nipoitra ny fanontaniana momba ny fanavaozana ny trano fitehirizana ovy amin'ny fanafoanana ny tsimokaretina hafa. Ohatra: tany UK, ny chlorprofam, araka ny filazan'ny AHDB (Birao momba ny fampandrosoana ny fambolena sy ny hortikultura), dia nampiasaina tamin'ny 85% amin'ny trano fitehirizana ovy rehetra. Nihatra ny fandrarana ny fampiasana azy Janoary 8 2020 taona, ny tompon'ny trano fitehirizana dia miatrika ny filàna fanadiovana ny fitehirizana ovy amin'ny dian'ity akora ity, ary tsy asa mora izany.
Ny fandinihana iray nokarakarain'ny AHDB dia nanamafy fa ny simenitra dia azo tazonina amin'ny CIPC: ny sisa tavela amin'ny chlorprofam sy ny metabolite 3-chloraniline (3-CA) dia napetraka ao amin'ny efitrano rehetra izay nampiasana an'io fanafoanana fitsimohany io, na inona na inona ny habetsahan'ny akora ampiasaina sy ny haavony. isan'ny fitsaboana.
Ny Filankevitry ny Fampandrosoana ny Fambolena sy ny Fambolena dia namolavola ireo fitsipika fototra tokony hotarihin'ny tompon'ny fitehirizana rehefa manao fanadiovana mba hampihenana ny loza ateraky ny fizarana indray ny chlorprofam ao amin'ny fitehirizana ovy, ary koa ny fampihenana ny habetsahan'ny phytopathogen inoclum. :
Ny trano fitehirizana rehetra izay nampiasana ny chlorprofam dia tsy maintsy diovina ara-potoana, indrindra raha vantany vao nesorina ny tranom-boankazo tamin'ny vokatra tamin'ny taona lasa.
Ny fitahirizana dia tsy maintsy diovina amin'ny fanarahana ny fepetra fiarovana ilaina: mila mampiasa fitaovana fiarovana ianao ary mitandrema rehefa manao asa amin'ny haavony.
Ilaina ny mitahiry ny fisoratana anarana an-tsoratra ny hetsika fanadiovana rehetra natao, miaraka amin'ny sary (sary dia tokony hitaratra hoe inona, ahoana ary oviana no nodiovina). Ny mpividy ovy dia afaka mangataka antontan-taratasy manamarina ny asa fanadiovana.
Tokony ho tsara kokoa ny fomba fanadiovana maina. Ilaina ny mampiasa rano raha tsy misy fanadiovana maina na tsy ampy. Amin'ny fanadiovana mando dia ilaina ny manala rano be loatra, manalavitra ny fandotoana ny tontolo iainana.
Ny asa fanadiovana dia tokony hatao amim-pitandremana, hisorohana ny fizarana indray ny chlorprofam. Tokony hodiovina haingana araka izay azo atao ny zavatra mivaingana, indrindra amin'ny fampiasana fitaovana vacuum. Ny fampiasana kifafa sy kifafa dia mitarika amin'ny fiparitahan'ny vovoka, izay manampy amin'ny famerenana indray ny dian'ny chlorprofam amin'ny tany.
Ny asa fitahirizana dia tokony hatao avy any ambony ka hatrany ambany (izany hoe avy amin'ny tafo ka hatrany amin'ny gorodona).
Chlorprofam dia fitambarana antonony mivadibadika, ka raha tsy ampiasaina amin'ny fitehirizana ovy ny fivarotana, dia ilaina ny mamela varavarana sy foy hivoha mba hampivoarana ny efitrano. Ny fantsona fantsona dia tsy maintsy avoaka tsara amin'ny alàlan'ny ventilation na ventilation voajanahary.
Raha azo atao, dia tokony esorina aloha ny fako maina, ary avy eo dia esorina amin'ny rivotra madio ny zavatra tsy hita maso mba ahafahan'ny masoandro (UV), orana, rivotra ary hafanana manala ny chlorprofam.
Mandritra ny fanadiovana dia tokony hojerena manokana ny faritra misy fandotoana chlorprofam.
Ary koa, ireo manam-pahaizana momba ny Vondrona Eoropeana Potato Value Chain dia namolavola ny "Torolalana amin'ny fampiharana ny fepetra amin'ny fanadiovana trano fitehirizana mba hampihenana ny haavon'ny fandotoana azy amin'ny chlorprofam" amin'ny endrika infografika (sary 1).
Saingy tsy mbola olana lehibe amin'ny indostria ny fanadiovana ny trano. Sarotra kokoa ny fisafidianana ny fanoloana ny chlorprofam.
- Ny trano fitehirizana dia tokony hodiovina raha vao misy ny vokatra 2019.
- Mampiasà fitaovana fiarovana manokana ary tandremo ny fiarovana.
- Mitahiry firaketana an-tsoratra sy/na sarin'izay nodiovina, ahoana ary oviana.
- Madio hatrany ambony ka hatrany ambany (izany hoe manomboka amin'ny tafo ka hatrany amin'ny gorodona).
- Toerana mafana: Tandremo bebe kokoa ny faritra misy fandotoana avo kokoa.
- Mampiasà fomba fanadiovana maina aloha (kifafa + mpanadio vacuum).
- Mampiasà borosy mekanika (indostrialy).
- Raha tsy ampy ny fanadiovana maina dia tandremo ny fanariana rano maloto.
- Manangona rano maloto ao anaty siny na lavaka.
- Boaty foana sy fitaovana fitahirizana. Tazony any ivelany izy ireo mandritra ny fotoana maharitra.
- Havaozy tsy tapaka ny rivotra ao amin'ny fivarotana amin'ny alàlan'ny famelana ny varavarana sy ny varavarana misokatra mandritra ny vanim-potoana tsy misy famokarana ny efitrano.
Araka ny AHDB, amin'izao fotoana izao any UK dia avela hampihatra izany toy ny suppressant ny fitsimohany maleic asidra hydrazide, menaka solifara sy ethylene.
Tsarovy fa ny maleic acid hydrazide dia nampiasaina ho toy ny suppressant any UK hatramin'izay 1985 taona. izany ampiasaina amin'ny fitsaboana ny zava-maniry mandritra ny vanim-potoanan'ny fitomboany mavitrika dimy herinandro alohan'ny fahamaizana na alohan'ny fahafatesan'ny tampony voajanahary. Maleic acid hydrazide dia manakana ny fizarazarana sela. Entin’ny raviny ary averina zaraina amin’ny tubers. Amin'ity tranga ity, ny habetsaky ny akora sisa tavela amin'ny maleic acid hydrazide amin'ny vokatra farany dia tsy tokony hihoatra ny 50 mg/kg.
Ny fahombiazan'ny fampiasana ny maleic acid hydrazide dia miankina betsaka amin'ny faharetan'ny fitsaboana: ny fampiasana aloha loatra dia mety hampihena ny habetsaky ny vokatra, tara loatra - hampihena ny fahombiazan'ny fampiharana suppressant. Hita tamin’ny fikarohana izany maleic asidra hydrazide tsara indrindra ampiasaina amin`ny fotoana fohy fitehirizana ny ovy: ny mety ho tsimoka amin`ity tranga ity dia ambany. Manamarika ny manam-pahaizana fa ny fitsaboana amin'ny maleic acid hydrazide, raha mitazona ny mari-pana ao amin'ny fitehirizana amin'ny 7-10 ° C, dia nahafahana nisakana ny tsimokaretina ovy natao ho an'ny fanodinana mandritra ny 2-4 volana.
Ethylene dia ampiasaina mavitrika amin'ny fitehirizana ovy latabatra (amin'ny mari-pana ambany, latsaky ny 5 ° C). Saingy mba hitazonana ny kalitaon'ny akora ho an'ny fanodinana, ity suppressant ity dia ampiasaina matetika kokoa: mino ny manam-pahaizana fa izany mety hiteraka fanovàna ny nofon'ny poti-ovy rehefa endasina.
Mba hampiadana ny tsimok'aretina amin'ny karazana ho an'ny fanodinana, ny manam-pahaizana britanika dia manoro hevitra ny hampifangaro ny fitsaboana amin'ny hydrazide asidra maleika miaraka amin'ny fitsaboana. menaka solifara ary ethylene. Na dia mbola mitohy aza ny fikarohana ny teknolojia mahomby indrindra amin'ny fikarakarana fitsaboana miaraka amin'ny suppressants.
Ny Filankevitry ny Fampandrosoana ny Fambolena sy ny Fambolena dia mavitrika amin'ny fanampiana ny tantsaha amin'ny fitadiavana ireo mpamono tsimoka hanoloana ny chlorprofam.
Indrindra indrindra, natomboka ny andiana webinars tematika, Storage Webinars, izay iresahan'ny manam-pahaizana momba ny endrik'ireo mpamono tsimoka hafa. Ankoatr'izay, ny UK Storage Network dia manome torohevitra matihanina maimaim-poana ho an'ny mpamboly ovy izay mandoa ny maha-mpikambana ao amin'ny AHDB mba hamolavola paikady fitahirizana ovy tsy misy chlorprofam.
Any Rosia, tsy mbola voarara ny fampiasana ny chlorprofam, saingy mety hiova ny toe-draharaha, ka amin'izany dia hiatrika fahasahiranana lehibe kokoa noho ny Britanika ny tantsaha Rosiana. Araka ny voalazan'ny "Directory of pesticides and agrochemicals nankatoavina hampiasaina ao amin'ny Federasiona Rosiana" ho an'ny taona 2020, ny maleic acid hydrazide dia ankatoavina ho ampiasaina amin'ny fivarotana ovy sy legioma, fa ny isan'ny fanafody an-trano dia tery kokoa noho ny any UK.
Amin'ny ankapobeny, zava-dehibe ny mahatakatra fa ny fampiasana suppressants ao amin'ny trano fitahirizana ovy dia azo ahena amin'ny alàlan'ny fanarahana ireo fitsipika fanta-daza amin'ny rafitra fambolena sy fitehirizana ovy.
Tags: Ivotoerana fikarohana momba ny tontolo iainana Rosianachlorprofampototra ny tahiry
Ny orinasa amerikanina Gowan dia nividy ny fanafody anti-rhizoctonia ambony avy any Bayer any Etazonia